ဌာန & ဝန်ထမ်းများမော်ကွန်းတိုက်» Hodges တက္ကသိုလ်
အမျိုးအစား: ဌာန & ဝန်ထမ်း
Hodges U သည်ကွန်ပျူတာဘွဲ့များဖြင့် ဦး ဆောင်နေသူဖြစ်သည်
ကျောင်းပရဝုဏ်ဘဝ, ဌာန & ဝန်ထမ်း, ကျောင်းများ
တွဲဖက်မဟာဌာနမှူး Tracey Lanham သည် Hodges တက္ကသိုလ်မှနည်းပညာတွင်နည်းပညာကို ဦး ဆောင်လမ်းပြ Associate Dean Tracey Lanham သည်အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းများရှိမိန်းကလေးများအားအစီအစဉ်များကိုပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်နည်းပညာနယ်ပယ်တွင်အမျိုးသမီးများအားပါ ၀ င်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်း၏ရှေ့တန်းမှပါ ထို့ကြောင့်ပါမောက္ခ Lanham သည် NCWIT တွင်ပါ ၀ င်နေပြီးသူမမမောနိုင်မပန်းနိုင်အလုပ်လုပ်နေသည့် [... ]	ဆက်ဖတ်ရန်
ပညာရပ်ဆိုင်ရာအကြီးတန်း VP ခန့်အပ်မှုအသစ်
ပညာရှင်များ, ကျောင်းပရဝုဏ်ဘဝ, ဌာန & ဝန်ထမ်း
Marie Collins ဂုဏ်ယူပါတယ်။ Hodges ခန့်အပ်ခြင်းပညာရေးဆိုင်ရာရာထူးဆိုင်ရာအကြီးတန်း VP ဒေါက်တာ Marie Collins ကို Hodges တက္ကသိုလ်မှပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်ဒုဥက္ကpresident္ဌအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ဤရာထူးတွင်သူသည် [... ] အသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအပြင်လက်ရှိသင်တန်းများနှင့်ဘွဲ့များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပါအ ၀ င်တက္ကသိုလ်၏ပညာရေးဆိုင်ရာရှုထောင့်များကိုကြီးကြပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။	ဆက်ဖတ်ရန်
Lamb သည် AVP ကျောင်းသားဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ရာထူးတိုးခဲ့သည်
ကျောင်းပရဝုဏ်ဘဝ, ဌာန & ဝန်ထမ်း
ပရိုမိုးရှင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်နော!! Noah Lamb သည် Hodges တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားဘဏ္Financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုလက်ထောက်ဒုဥက္ကPresident္ဌရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ ဤရာထူး၌နော financial သည်ဘဏ္Financialာရေးအထောက်အပံ့၊ ဝါရင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အရန်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ငွေရရန်အပါအဝင်ကျောင်းသားဘဏ္Financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုညွှန်ကြားသည်။ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းမခံရမီသူသည်ကျောင်းသားစာရင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အရန်စစ်ဆင်ရေး၏ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။	ဆက်ဖတ်ရန်
ဂျိုး Turner ကျောင်းသားဟောင်းများကွန်ယက်ဌာနမှူး
ဂျိုးတာနာကြိုဆိုပါတယ် ငါတို့အတွက်မင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ် ၂၀၁၁ Hပြီလ ၁၀ ရက်၊ Hodges တက္ကသိုလ်ရှိ Turner အားအကြီးတန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကျောင်းသားဟောင်းများအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးသူအမည် --NAPLES / FORT MYERS, FLA - Joe Turner သည် Senior Marketing နှင့် Alumni Outreach Content Creator အနေဖြင့် Hodges တက္ကသိုလ်သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။ ဤရာထူး၌သူသည် […] ကိုတည်ထောင်ခြင်းအပြင်တက္ကသိုလ်၏ကျောင်းသားဟောင်းများနှင့်ပတ်သက်သောအစပျိုးမှုများကိုကြီးကြပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
ဌာန & ဝန်ထမ်း
ရာထူးသစ်အတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရသူ Michelle! Michelle Zamniak သည် Hodges တက္ကသိုလ်ရှိမိတ်ဖက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ သူမသည်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသရှိအထက်တန်းကျောင်းများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ အစိုးရများအပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်နေသည်။	ဆက်ဖတ်ရန်
Lujic သည်ကျောင်းအပ်နှံခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ AVP အဖြစ် Hodges တက္ကသိုလ်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်
Brodislav Hodges မှကြိုဆိုပါတယ်။ Branislav Lujic သည်ကျောင်းအပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၏လက်ထောက်ဒုဥက္ကas္ဌအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရခြင်းဤရာထူး၌ Branislav Lujic သည် ၀ င်ခွင့်များ၊ ပထမဆုံးထင်မြင်မှုများနှင့်ကျောင်းသားအတွေ့အကြုံအဖွဲ့များကိုကြီးကြပ်သည်။ ထို့အပြင်သူသည်တက္ကသိုလ်၏နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများစုဆောင်းမှုနှင့်အဝေးရောက်မှုကို ဆက်လက်၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်။ သူသည်ကျောင်းသားစုဆောင်းမှုနှင့်ကျောင်း ၀ င်ခွင့်များတွင် ၁၀ နှစ်ကျော်ကျွမ်းကျင်မှုရှိခဲ့သည်။ မတိုင်မီက [...]	ဆက်ဖတ်ရန်
Chris MacNeil ကြိုဆိုပါတယ်
Hodges တက္ကသိုလ်မှ Chris MacNeil မှကြိုဆိုပါသည်။ Chris MacNeil သည် Fort Myers ကျောင်းဝင်းအတွက် ၀ င်ခွင့်အတွက်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် Hodges တက္ကသိုလ်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဤရာထူး၌သူသည်တက္ကသိုလ်၏ Fort Myers ကျောင်းဝင်းကို အခြေခံ၍ ကျောင်းဝင်ခွင့်အဖွဲ့ကိုကြီးကြပ်လိမ့်မည်။ ကျောင်းအပ်ရန်ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ခြင်းအပြင်ခရစ်သည်ကျောင်း ၀ င်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးလေ့ကျင့်ပေးမည်။ ခရစ် [... ]	ဆက်ဖတ်ရန်
Arenas သည် Hodges တက္ကသိုလ်သို့အကြီးတန်းတီထွင်ဖန်တီးရှင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်
Santiago Arenas Hodges တက္ကသိုလ်မှကြိုဆိုပါသည်။ မတ်လ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် - Naples / Fort MYERS, FLA - စန်တီယာဂို Arenas သည် Hodges တက္ကသိုလ်သို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာ၏အကြီးတန်းဖန်တီးမှုဒီဇိုင်နာအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဤရာထူး၌ Santiago သည်တက္ကသိုလ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဒီဇိုင်းအားလုံးကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်တက္ကသိုလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုကြီးကြပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ အရီနာ့စ်သည် [... ]	ဆက်ဖတ်ရန်
ကုန်သွယ်ရေးနေရာများ - #MyHodgesStory ပါမောက္ခတစ် ဦး သည် Wall Street တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမှစာသင်ခန်းအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမှအာနိုး Miyamoto သို့သွားစဉ်လမ်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံး၌ဘဝကိုမည်သို့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသနည်း။ Wall Street ရန်ပုံငွေကိုနှစ် ၃၀ နီးပါးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးသူသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူပေါင်း ၄၅၀ ကျော်ကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ပြီးဘဏ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းလက်နက်အတွက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။	ဆက်ဖတ်ရန်
ဤရွေ့ကားအားလုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်တစ် ဦး စိတ်အားထက်သန်လက်ခံ
ဤနှစ်များကုန်လွန်ပြီးနောက်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလက်ခံခြင်း - Dr. Dolores Dee ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း Batiato ဒေါက်တာ Dolores“ Dee” Batiato သည်စာသင်ခန်းကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူမ၏စိတ်အားထက်သန်မှုသည်သူမ၏ကျောင်းသားများကိုသင်ကြားပေးခြင်း၊ ထိတွေ့ခြင်းနှင့်အားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ Hodges တက္ကသိုလ်မှပါမောက္ခနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥက္ကchair္ဌအနေဖြင့်သူသည်ကျောင်းသားများကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှင်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုနားလည်ပြီး“ ဒါဟာ [... ]	ဆက်ဖတ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နှင့်လူတစ် ဦး လှူဒါန်းခြင်းကိုဆက်သွယ်ပါ
Hodges Connect သည်လုပ်သားအင်အားကျွမ်းကျင်မှုကွာဟချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်
Hodges U အဖွဲ့အား ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊
Hodges တက္ကသိုလ်မှ Hodges Connect ကိုကြေငြာခဲ့သည်